Wararka - Alaabada Marathon-ka ah iyo Qalabka
Marka laga hadlayo dadaallada samafalka iyo dhacdooyinka, marathons waxay ka mid yihiin xulashooyinka ugu caansan ee halkaas ka jira. Maratoonku wuxuu u oggolaanayaa orodyahannada inay muujiyaan awooddooda, kartidooda iyo u heellankooda sadaqadooda ama kafaalaqaadaha xulashada alaabada maaratoonka caadada ah. Ma jiraan wax la mid ah maalin jimicsi daran oo lagu dhiirrigeliyo dadka inay ku deeqaan iyo in ka badan iyo shaqsiyaad badan oo ka qayb qaata; hadday ahaan lahayd ammaanta, ka-qaybgalka ama xitaa fursadda aad ku guuleysan karto bilo ama sannado tababar ah ka dib.
Iyada oo marathons ay ku hayaan shucuur aad u xoog badan shakhsiyaad aad u tiro badan, iyo boqolaal kun oo orodyahanno ah oo galaya dhacdooyinka sanad kasta, marna ma jirin waqti fiican oo lagu dardar geliyo rafcaankaaga muuqaalka ah ee heerka ku xiga. Qabanqaabiyaasha maaratoonka, ka istaagida dadka wey sii adkaaneysaa; laakiin xaqiiqdii waxaa jira waxyaabo badan oo la sameyn karo si sumaddaada isla markiiba looga aqoonsan karo dhacdooyinka kale ee halkaas ka jira. Mid ka mid ah habka ugu wanaagsan ee lagu bilaabi karo waa iyada oo la maal gashado dhar habaysan oo loogu talagalay xilliga marathon-ka xagaaga, laga bilaabo t-shaati-gacmeedyo loo qaabeeyo xulashooyinkaaga hoodie.
Waxaa sharaf noo ah inaan la shaqeyno ururka Imbube Marathon, oo siineyno dhacdooyin taxane ah oo leh funaanad orod ah, hoodies, funaanad polo, lebiska garsooraha, billadaha, tuwaalka marathon, sharaabaadyo, koofiyado, koob, siliki silikoon, banner, calamada kutlada, xayndaabka xayndaabka iwm
Ku saabsan Imbube Marathon: Boqortooyadii, King Mswati III wuxuu lahaa aragti heer caalami ah, oo ah dhacdo orod dheer oo loogu talagalay Boqortooyada Eswatini. Sanduuqa 'Eswatini National Provident Fund', oo ay weheliso dhacdooyinka maal-galiyeha weyn ee Bangiga Standard Bank Eswatini waxay ku faraxsan yihiin inay martigeliyaan munaasabaddan sharafta leh Axad kasta oo ugu horreysa Oktoobar (6-da Oktoobar 2019).
Miyaad ka fikireysaa inaad maal gashato funaanado gaar ah ama qalab loogu talagalay Maratoonkaaga soo socda? Markaa Dhiska Dharkaaga Adiga ayaa ah adeegga adiga kugu habboon. Abuur dhar iyo qalab gaar ah oo si fiican ugu habboon astaanta dhacdadaada, dadaal la'aan. Looma baahna geeddi-socodyo adag, dib-u-soo-celin dheer ama nidaamyo jahwareer leh. Si aad u codsato sicirka adeegyadayada, nala soo xiriir hadda.